हेडफोन अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरू: हेडफोन
डोम » "हेडफोन" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
बजारमा GRP बाट बाढी आयो, यो खेलाडी हराइरहेको थियो!
मार्शल, हेडफोन, tws
बजार सही वायरलेस हेडफोनको साथ बाढी आएको थियो। रजर जस्ता खेलाडीहरूले पनि यसमा प्रवेश गरे। पौराणिक अडियो निर्माता, मार्शल, लामो समयदेखि हराइरहेको थियो। आज सम्म ... म एक पटक उनीहरूको एन्ट्री लेभल मार्शल मेजर ओभर-इयर मोडलको मालिक थिएँ ...
सोनीले WF-1000XM3 हेडफोनको उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्दछ
WF-100XM3 हेडफोनको प्रीमियरको दुई वर्ष पछि, सोनीले आफ्नो दिग्गज हेडफोनमा उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्नेछ। सोनीले WF-1000XM3 मोडल WF-1000XM3 को उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्दछ किनकि दुई बर्षको मोडेल अलि उमेर ढल्किन्छ, त्यसैले कम्पनीले धेरै चाँडै यसमा उत्तराधिकारी प्रस्तुत गर्ने बारे सोचे ...
एयरपड्स प्रो एप्पलबाट हेडफोन प्रो को समीक्षा
airpods, airpods समर्थक, स्याऊ, हेडफोन, tws
यो सत्य हो कि सबैले एअरपड्स प्रो २ को बारेमा कुरा गरिसकेका छन, जुन एप्पलले चाँडै रिलीज गर्ने छ, तर एयरट्यागले पनि एक बर्ष पहिले प्रिमियर गर्नु पर्ने थियो त्यसैले मैले एयरपड्स प्रो हेडफोनको समीक्षा रिलीज गर्ने निर्णय गरें। मैले तिनीहरूलाई किन्नको योजना गरेको छैन, ...
ट्रोनमार्टले बजारमा new नयाँ उपकरणहरू प्रस्तुत गर्दछ
नयाँ वर्षको सुरूदेखि लगभग एक महिना भयो। हाम्रो नयाँ वर्षको रिजोलुसन लामो समय अगाडि कार्यान्वयन हुने क्रममा हुनुपर्दछ, हैन? र तपाई कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? ठीक छ, हुनसक्छ, वा हुनसक्छ तपाईलाई केहि प्रेरणाको आवश्यकता छ? आज हामीसँग तपाईंको लागि ...
TWS ईयरफोन - २० डिसेबल एएचएस -20-एएनसी
द्वारा प्रकाशित	जाजाकी
२० डेबेल, ahs75-anc, हेडफोन, tws
भर्खर, २० डिसेबल एएचएस 20-एएनसी हेडफोनहरू मेरो हातमा पर्‍यो (वा कानमा)। बजार धेरै टेक्नोलोजिकल समाधानहरूले भरिएको छ, र निर्माताहरू हेडफोनहरू बनाउनमा एक-अर्कालाई आउट गर्दै छन्। भर्खर, TWSy (True Wireless Sound) प्रवेश गर्दैछन् ...
Razer Hammerhead TWS - आइतबार खेलाडीको परिक्षण
रेजर, रेजर हथौडा, हेडफोन
एकीकृत इन्टेल ग्राफिक्सको साथ एक अल्ट्राबुकको प्रयोगकर्ताको रूपमा, म पीसी मास्टर दौडमा भाग लिनबाट टाढा छु। अझै, म सँधै एक रेजर उत्पादन चाहान्छु। मलाई थाहा छैन यदि यो "Chroma" ब्याकलाइट, सामग्रीको गुणस्तर, वा हुनसक्छ ...
के ट्रोन्स्मार्ट ओणिक्सका हेडफोनहरू सर्वश्रेष्ठ बजेट हेडफोनहरू हुन्?
muzyka, हेडफोन, ताररहित हेडफोन, ईयरफोन
र यो भयो। मेरो हेलोउबाट हेडफोनको समीक्षा (जुन तपाईं यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ) अडियो। सम्पादकीय कार्यालयमा कोहीले (एरियललाई अभिवादन) भने कि म यस प्राविधिक र संगीतमय संसारको सबै उत्पादनहरू समीक्षा गर्नेछु। र यति भित्र ...
Haylou? के तपाईँ मेरो बोली सुन्नुहुन्छ? Haylou GT2S वायरलेस हेडफोन समीक्षा
4 डिसेम्बर 2020
हेलो, हेडफोन, ताररहित हेडफोन, ईयरफोन
धेरै सुरुमा, मैले मेरो विचारहरू हाइलो जीटी २ एस हेडफोनहरूमा मोनिटर स्क्रिनमा खन्याउन थाल्नु अघि, तपाईं मेरो बारेमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्दछ। म एक ठूलो अडियोफाइल हुँईन जसले हरेक आवाज (वा यसको अभाव) सुन्छ। म पछि छु ...